What’s Enterprise Resource Planning? | Global Connect Asia
What’s Enterprise Resource Planning?
Enterprise Resource Planning(ERP) ဆိုတာ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ခန့်ခွဲထားသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Enterprise Resource Planning system မှာ ပါဝင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ business management, supporting areas such as planning, manufacturing, sales, marketing, distribution, accounting, finance, human resource management, project management, inventory management, service and maintenance, transportation, and e-business တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သတိပြုရမှာကတော့ ERP ဟာ တခြား Software တွေနဲ့မတူပဲ အတွေးအခေါ်နှင့် အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီး ရေးသားထားတဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Odoo ERP System ကို အသုံးပြုသင့်တဲ့အချက်တွေကို အနည်းငယ်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
ERP system ဆိုတဲ့ အောက်မှာ အထက် ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးပါဝင်တာမို့ သက်ဆိုင်ရာ Department Head ကနေပြီး မိမိတို့လိုချင်သော Data, Report များကိုတစ်နေရာထဲမှာအလွယ်တကူကြည့်ရူနိုင်သလို တစ်နေရာထဲမှာပဲ လုံခြုံစိတ်ချစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
(၂) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပိုကောင်းလာခြင်းနှင့် အချိန်ကုန်သက်သာလာခြင်း
လိုချင်တဲ့ မည်သည့် Report မျိုးမဆို မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီးထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။Income and Expense Statements, Sale Data, CRM Analysis တွေကို Peport ထုတ်ပြီး Analysis ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ Report ထုတ်တာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ထင်လဲ….. မိနစ်ပိုင်းလေးပါပဲ။
(၃) Customer Relationship လွယ်ကူခြင်း
Customer Relationship Management ကိုကောင်းကောင်းပြုလုပ်နိုင်မယ့် System ဆိုရင်ဖြင့် ERP system မှာပါဝင်တဲ့အတွက် Lead Generation အသစ်တွေကိုစာရင်းမှတ်ခြင်း
ဒီ customer ဟာ Butterfly Customer လား Loyaly Customer လားဆိုတာ အလွယ်တကူသိရှိနိုင်တဲ့အတွက် Customer အသစ်တွေကော အဟောင်းတွေအတွက်ကော စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိအောင် အများကြီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင်မှုပိုင်းမှာလဲ စနစ်တကျ ပစ္စည်းတစ်ခုခြင်းစီ အလိုက် system ထဲမှာထည့်သွင်းထားတာကြောင့် အလေအလွင့်ဖြစ်ခြင်းကို‌လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် စသည့်အကြောင်းအရာများအပြင်အခြားအခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်မြောက်များစွာရှိနေပါသေးတယ်။